-Agbalị na-ijeụkwụ na tomb raider Lara Croft dị ka ọ na-aga na a na-akpali akpali na uru cha cha njem nke na-esi anwụde. Eme na-awụlikwa elu site video egwuregwu ka fim bụ mfe. Ugboro otu feat, na oghere version nwere maara Lara Croft na-emeri prizes maka gị na 5 esi anwụde, 15 paylines game.
Tomb raider Lara Croft na akara
Kama ịbụ ihe, ndị maara ihe oyiyi hụrụ na fim na-etolite ihe nnọchianya ndị tomb raider Lara Croft oghere egwuregwu. Ekiri Lara dị ka ọ na-abia a na-emeri inwe na-esi anwụde ya egbe, a Bengal tiger, arụsị, egwuregwu mgbagwoju anya na kaadị akara na-egosi na-esi anwụde.
Tomb raider Lara Croft ga-achịkwa ndị 5 -esi anwụde na paylines capped na 15.
Wild: The egwuregwu logo of tomb raider Lara Croft nwere ike whiplash ọ bụla ọzọ akara nke na-esi anwụde ike a na-emeri payline. -Egwu egwuregwu ahụ 7,500 coins-agbata n'ọsọ a pụrụ imeri mgbe 5 of these symbols appear on the reels.
ikposa: The obi ike na daring Lara bụ ikposa na-egosi na-esi anwụde n'oge ọ bụla, n'ebe ọ bụla na-akwụ ikposa Enwee Mmeri. Ọ pụrụ ime ka egwuregwu karịa afọ ojuju mgbe 3 ma ọ bụ karịa nke ya egosi na-esi anwụde ịkpalite free spins. imeri 10 free spins na a 3X multiplier. -Eme ka ebe a sinanfiputa ịkpalite free spins gburugburu.
Ọzọ bonus gburugburu iji kwalite player Enwee Mmeri bụ Ili daashi. Pick up 3 ma ọ bụ karịa n'ime ihe ndị daashi arụsị na akara na-akpali egwuregwu a iji merie ruo 2,500 mkpụrụ ego. Bugharịa n'elu ka a ọhụrụ ihuenyo ebe ị ga-eburu 3 out of 12 ihe iji nweta random multipliers. -Utịp dị ka atụmatụ nwere ike retriggered.
m / Max Bet kwa atụ ogho (£ / $ / €): 0.01 - 0.05
jackpots (£ / $ / €): 7,500 mkpụrụ ego (isi egwuregwu)
Popular console egwuregwu na-eme ntughari ka ohere mpere na dịgasị iche ihe ịga nke ọma. Tomb raider Lara Croft udu elu ya ngwa ngwa gameplay na ndịna. Ọ bụ maa kwesịrị egwu na-akpọ maka ezi payouts na obi ụtọ.